Jorgen Klopp oo ka hadlay dhibataada dhaawac ee heysata kooxdiisa xilli ciyaareedkan. Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Jorgen Klopp oo ka hadlay dhibataada dhaawac ee heysata kooxdiisa xilli ciyaareedkan.
Jorgen Klopp oo ka hadlay dhibataada dhaawac ee heysata kooxdiisa xilli ciyaareedkan.
Klopp wuxuu sheeganayaa in Liverpool ay ugu dhowaan doonto Manchester City ‘xilli ciyaareed caadi ah’ Difaaca cinwaanka ‘Reds’ ayaa la baabi’iyay usbuucyadii la soo dhaafay maadaama dhaawacyadu ay bateen
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa sheegay in kooxdiisu ay ku sii dhowaan doonto hogaamiyaasha Premier League ee Manchester City hadii 2020-21 ay ahaan laheyd xilli caadi ah.
Dhowr ciyaartoy oo muhiim ah oo Liverpool ah ayaa ku dhaawacmay dhaawac culus ayaa soo gaaray gaar ahaan daafaca Virgil van Dijk, Joe Gomez iyo Joel Matip ayna u badan tahay inay seegi doonaan inta ka dhiman xilli ciyaareedka.
Kooxda Klopp ayaa ku guuleysatay horyaalkoodii ugu horreeyay ee Premier League xilli ciyaareedkii hore laakiin haatan waxay ku jiraan kaalinta lixaad, iyagoo 16 dhibcood ka hooseeya kooxda Pep Guardiola.
“Waligeed ma aheyn kiis aan ka fikirnay sida aan ula qabsan karno City. Ama sidee ayaan u noqon karnaa kooxda ugu fiican kubada cagta Ingariiska mar labaad, wax kasta oo taasi micnaheedu yahay, ”ayuu yiri Klopp.
Waxaan dooneynay inaan noqonno nooca ugu fiican nafteena. Fursadaas mar labaad ayaan haysannaa. Haddii taasi fiicantahay, way fiicantahay. Haddii koox kale ay ka fiican tahay, taasi waa sida isboortiga u shaqeeyo.
Ma qaban karno wax ka badan sidii aan u noqon lahayn nooca ugu fiican nafteena waana taas waxa aan markale isku dayi doonno koox ahaan.
Taas awgeed waxaan u baahan nahay nasiib yar, dabcan. Xoogaa nasiib yar oo dhaawacyada ah waanan u dhowaan karnaa taas.
Dhamaanteen waan isku raacsanahay, waana hubaa inuu Pep dhihi lahaa, xilli ciyaareed caadi ah labada koox ma noqon laheyn 16 dhibcood.
Laakiin annagu waan nahay. Taasi waa sida ay tahay. Waan aqbalnaa. Xilligan ma ahan walaac aan ka qabno sida ugu dhow ee aan ugu dhowaanno City. Waa illaa iyo inta aan miiska u kici karno. Taasi waa shaqo ku filan in la qabto.”
Qaar ka mid ah ciyaartoydii ugu muhiimsanaa Liverpool ayaa seegay waqti muhiim ah xilli ciyaareedkan. Waxyeelada ugu badan ee Reds sabab u ahayd dhaawacyada Van Dijk, Gomez iyo Matip – seddexda daafac ee ugu sareysa kooxda.
Intaa waxaa sii dheer, Diogo Jota, Thiago Alcantara, Naby Keita, Fabinho, Jordan Henderson, Alisson iyo Trent Alexander-Arnold ayaa dhamaantood waqti ku seegay meelo kala duwan.
Fabinho iyo Henderson ayaa lagu qasbay inay galaan kaalimaha daafaca dhexe si ay ugu daboolaan dhaawacyada, taasoo keentay in Reds ay ka liidato qadka dhexe.
Ozan Kabak iyo Ben Davies ayaa la keenay intii lagu jiray suuqa kala iibsiga bishii Janaayo si ay uga caawiyaan daboolida maqnaanshaha Liverpool ee daafaca.
Liverpool ayaa wajaheysa kooxda Everton kulanka Merseyside derby sabtida, ka hor inta aysan kulammo kale oo horyaalka ah la ciyaarin Sheffield United, Chelsea iyo Fulham.
Kooxda Klopp ayaa markaas wajihi doonta RB Leipzig lugta labaad ee Champions League wareega 16ka, iyagoo badiyay lugtii hore 2-0 isbuucaan.
Previous articleFalanqeynta kulanka Southampton Vs Chelsea ee Horyaalka Premier League
Next articleMan united oo wili ka harin xidiga barcelona iyo spian Anzu Fati.